Chelsea Oo Gool Qurux Badan Ku Garaacday Atletico Madrid & Bayern Munich Oo Xasuuq Ka Soo Geysatay Talyaaniga | Laacibnet.net
HomeWararka Champions LeagueChelsea Oo Gool Qurux Badan Ku Garaacday Atletico Madrid & Bayern Munich Oo Xasuuq Ka Soo Geysatay Talyaaniga
Chelsea Oo Gool Qurux Badan Ku Garaacday Atletico Madrid & Bayern Munich Oo Xasuuq Ka Soo Geysatay Talyaaniga
February 24, 2021 Balaleti
Chelsea ayaa sarre u qaaday fursadeeda ay ugu soo bixi karto wareega sideed dhamaadka Champions League ka dib markii ay 1-0 ku suuldaareen kooxda Atletico Madrid oo marti loo ahaa lugta hore ee wareega 16ka.
Gool aad u qurux badan oo qalaama rogaal ah uu dhaliyay Olivier Giroud qeybtii labaad ee ciyaarta ayay Chelsea ku dubatay kooxda Atletico Madrid oo lugta labaad booqan doonta garoonka Stamford Bridge.
Labada kooxood ayaa soo bandhigay qeybtii hore ciyaar aan socod badan laheyn gaar ahaan kooxda ku qoran in martida loo yahay ee Atletico Madrid.
Chelsea ayaa kubada si fiican u wareejineysay laakiin wax hanjabaad ah ma aysan geysan halka Atletico ay ciyaareysay kubadii lagu yaaqanay ee ah inay jahwareeriso kooxaha ka horyimaada.
Atletico Madrid kaliya hal darbo ayay sameysay qeybtii hore, waa markii ugu horeysay ee ay sidaan ku dhacdo 45ta daqiiqo ugu horeysay kulan Champions League ah tan iyo xilli ciyaareedkii 2016-17.
Chelsea ayaa isku dayday 403 baasas qeybtii hore, waxayna aheyd 100 baas in ka badan inta ay sameysay Atletico Madrid. Qeybtii hore waxaa sidoo kale la bixiyay jaalihii ugu dhaqsaha badnaa Champions League xilli ciyaareedkan iyadoo xiddiga Chelsea Mason Mount uu 55 ilbiriqsi ku qaatay calaamada digniinta.
Daqiiqadii 68aad ayay Chelsea hogaanka ciyaarta ugu qabatay si cajiib ah ka dib markii Olivier Giroud uu dhaliyay gool uu qalaamo rogaal sameeyay, wuxuuna ahaa gool aad u qurux badan laakiin VAR ayay ku qaadatay labo daqiiqo inay goolka xaqiijiso.
Giroud ayaa boos offside ah taagnaa markii uu kubada helayay balse waxaa offside-ka meesha ka saaray inay kubada ku soo dhacday Hermoso taasoo ka dhigeysa Giroud inuusan offside aheyn goolka sax ka dhigtay.
Chelsea oo ciyaarta maamuleysay ayaa u qalantay guusha ay ka gaartay Atletico Madrid oo ciyaarta ku bilaabatay difaacasho kuna dhameysatay kubad difaacasho.
Dhanka kale Bayern Munich ayaa magaalada Rome waxay 4-1 ku xasuuqday kooxda Lazio iyagoo hal lug la sii galay wareega sideed dhamaadka Champions League.
Sagaal daqiiqo ayay ku qaadatay Bayern Munich inay hogaanka u qabato ciyaarta waxaana shabaqa u soo taabtay mashiinkooda goolasha Robert Lewandowski. Xiddiga reer Poland ayaa dhaliyay goolkiisii 72aad ee Champions League isagoo ka sarre maray xiddigii in muddo ah soo heystay rikoodhka gooldhalinta Raul.
Jamal Musiala ayaa u labeeyay ka hor inta uusan Leroy Sane dhalinin goolka seddexaad wax yar hor waqtigii nasashada ciyaarta iyadoo lagu kala nastay 3-0 oo ay Bayern hogaanka ku heysay.
Labo daqiiqo markii ay socotay Bayern Munich ayaa dhalisay goolkeeda afaraad oo uu iska dhaliyay xiddiga Lazio Francesco Acerbi laakiin Lazio ayaa gool la soo noqotay daqiiqadii 49aad iyadoo uu u saxiixay Joaquin Correa.
Bayern Munich oo difaacaneysa koobka ayaa haatan hal lug la sii gashay wareega sideed dhamaadka madaama ay guul weyn ku soo gaareen garoonka Lazio ka hor kulanka lugta labaad oo ka dhici doona Allainz Arena horaanta bisha soo socota.
Hordhac: Liverpool vs Chelsea - DAGAALKA Kaalinta 4aad, Tuchel Oo Rikoodh Dhigi Kara, Klopp Oo Ka Ordaya Taariikh Madow Iyo Shaxaha Macquulka Ah
Shaxda Rasmiga Ah Ee Barcelona vs Sevilla - Koeman Oo Ku Soo Shirtagay 3-4-3 Xilli Barca Lagu Leeyahay Labo Gool Oo Nadiif Ah
Miyay Fabinho, Diogo Jota & Goolhaye Alisson Dheelayaan Kulanka Chelsea? Jurgen Klopp Ayaa War Rasmi Ah Ka Soo Saaray